AF-XUMO NABADNA KAA KAXEYSEY COLAADNA WAX KAAMA TARTO!!!
Faahfaahin: inka badan 40 Askari oo DFS Looga Dilay Weerarkii Ceelsaliini Iyo Gaadiid Laga Furtay.
Tuesday April 07, 2015 - 06:22:29 in Wararka by Super Admin
Sheekooyinka Soomaalida waxa ka mid ah sheeko laga sameeyey nimcooleyda Lo’da la yiraahdo, sheekaduna sidan ayey u dhacday. Waxa ciyey Dibigii lo’da horjoogaha u ahaa, talada lo’dana looga dambeynayey. Dibigii ayaa la weydiiyey waxa ku xambaarey in uu ciyo, waxa uuna ku jawaabay: xoogga iyo raganimada igu jirta darteed ayaa u ciyey. Waxa isna ciyey Sicii lo’da u caana badnaa, ubadka inta badana soo koriyey. Waxaa isna sicii la weydiiyey, sababta ku kalliftey in uu ciyo, waxa uuna ku jawaabay: caanaha iyo hooyonimada aan soo koriyey ubadka ayaa igu kalliftey in aan ciyo. Weyl yar oo weylaha ka mid ahaa ayaa isna ciyey. Isagiina waxa la weydiiyey sababta uu u ciyey, waxa uuna isna ku jawaabay lo’duba cidaye sidaas darteed ayaan anna u ciyey, sababta oo ah ma lahayn garaaddo iyo waxtar uu ku faano, lo’dana uu ku soo kordhiyey.
Haddaba sheekadan waxa ay u egatahy niman maalin dhaweyd ku shiray rugta, Sharma-sheekh,mar walbana ay ku shiraan magalootiyada dadyowga Carabta la hor qotomiyey, ee Muslimiinta lagu salladay in ay luggooyo iyo dabar goyn u geystaan, kulankooduna uusan ahayn mid wax micne weyn leh ku soo kordhinaya, marka laga reebo in Muslimiinta tacaddiyo loogu geysto mooyee, isla-markaasna haadaan ka tuura Muslimiinta iyo Islaamkaba.
Magalootiyadaasi weli kama hadlin ama dareen damqasho kama muujin dhibaatooyinka loo geysanayo Muslimiin badan oo dunida daafaheeda ku nool, gaalona sir saaqba u leyneyso, laakiin waxa muuqata niman Muslimiin sheeganaya inkasta oo faham khaldan oo gaalnimo gaarsiin kara laga helayo ayey u tafaxayteen(Xuutiyiin). Waxa jira gaalo-asali ah, habboonna in la la daggaallamao ama la la jihaado, kuwaas oo dalalka Muslimiinta ku soo duulay, sida Soomaaliya, oo ciidamo kufaar madow ah laga adeejiyey, Maalioo Faransiis gaalo ahi soo galeen astaamiihii Islaamkana la daggaallamaya, Afrikada Dhexe, oo Muslimiintii la xabaal nololiyey, waxna la gubay, intii kalena la qaxiyey. Dalka Burma oo Muslimiintii gummaad asali ah lagu hayo, reer Falastiinoo Yuhuud qurunley sidii ay doonto u leyneyso. Nuseyriga xunka ah ee ini Asad, oo maalin walba gummaadaya Muslimiinta reer Suuriya.
Intaa haddii aan ku dhaaafo dhufaannada Carabta, waxa isna jira mid afka Soomaaliga ku hadlo, shirkaasna ka qayb galay, kursigaa beenta ee Sharma-sheekh la dhigay, wax dawladnimo ah oo ka hooseeyaana aysan jirin in uu buuxiyona dan weyn iyo guul siyaasadeed u arka, lana yiraahdo Xassan Sheekh Maxamuud. Xassan Sheekh waxa uu la mid yahay weylkii yaraa ee ciyey, maaddaama uusan lahayn karti dawladeed oo uu ku faano ama sheegto, waayo isaga ayaaba gaalo madmadoobi ilaalisaa, sidaa darteed in uu raggii ciyey ee Carabta kale ahaa, isuna arka niman macne ku soo kordhin kara fagaaraha siyaasadda iyo dagaalkaba, sidoodii u ciyo ayaa muuqata, dad badan oo Soomaaliyeed, Yemena ku noolaa muddo dheer, ayaana cidiisii eersatay, lana laayey ama waxyeello loo geystey, mana aha mid awood dawladeed oo uu mas’uul ka yahay ku soo daadgureyn kara dadkaas dhibta iyo tacaddiyada afkiisa darteed loogu geysanayo ama lagu waxyeelaynayo.
Waxa aan qormadan yar ku soo af-meerayaa in ummadda soomaaliyeed dareemaan dhibaatooyinka iyo hagardaamada ay ku hayaan nimankan qawsaarrada ah ee mar walba ama dhawrkii sanoba mid loo soo waaridayo, cid ay matalaan ama dooratana aan la garaneyn, dadkana dusha lagaga keenayo. Kaddib markii ay dhulkii iyo dadkiiba baabi’yeen ayey haddana kuwii dalka ka yaacay af-xumo aan colaadna wax ka tareyn nabadna ka kaxaynaysa ka la daba tagey. Arrintaas oo u muuqata mid la soo abaabulay ama la soo qorsheeyey, isagana afka loo geliyey, isaga oo aan garasho siyaasadeed iyo dadnimo toonna ka muuqan, illeyn haddii uu intaa dhaamo waxa ayuu xeerin lahaa ama iskula hari lahaaye.